Qiimaha layaabka leh ee tamarta qoraxda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Bulshadu waxay sii waddaa doodaha ku saabsan inay caqliyan tahay in aan si adag loogu shaacin tamarta la cusboonaysiin karo (tamarta qoraxda, tamarta dabaysha iyo kuwa kale). Teknolojiyadaha tamarta ayaa dhaafaya dowladaha adduunka badhkiis waxayna ku socdaan wadadii ay doodan ugu rogi lahaayeen wax gebi ahaanba waqtigiisii ​​dhacay.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ama caqabadaha ay leeyihiin xoogagga dib loo cusboonaysiin karo qaarkood ayaa ah qiimaha maalgashiga ee bilowga ah. Si kastaba ha noqotee, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka timid GTM Research, qiimaha rakibaadda tamarta qorraxda ayaa hoos u sii socon doona illaa 27% marka la gaaro sannadka 2022. Iran celcelis ahaan hoos u dhaca qiimaha 4,4% celcelis ahaan ilaa 27%.
1 Qiimaha tamarta qoraxda ayaa hoos udhaca
4 Qiimaha tamarta qorraxda iyo qiimaha dhuxusha
Qiimaha tamarta qoraxda ayaa hoos udhaca
Warbixinta ayaa saadaal ka bixinaysa qiimaha nidaamyada sawir-qaadaha qoraxda. Dhexdeeda, isbeddel joogto ah ayaa lagu ogaan karaa taas oo gacan ka geysaneysa hoos u dhaca qiimaha mashaariicda qorraxda. Qiimayaashan kaliya hoos looma dhigi doono qiimaha sababtoo ah hoos u dhaca qiimaha modullada, laakiin sidoo kale maalgashadayaasha ka jaban, kuwa raacsan, iyo xitaa kharashyada shaqada.
Dhammaan gobollada dooran kara tamarta la cusboonaysiin karo waxay ka faa'iideysan doonaan hoos u dhaca qiimahaas. Qiimaha ugu hooseeya ee ugu hooseeya wuxuu ka yimid Hindiya, halkaas oo nidaamka xaraashka dalku uu ahaa mid si joogto ah wax soo saar u keenaya isla markaana ay ka dhasheen dalabyo tartan badan leh. Tani waxay sababtay in qiimayaashu ay hooseeyaan oo ay hooseeyaan.
Tani waa war weyn oo u ah dhammaan dadka doorta tamarta la cusboonaysiin karo ee dhalinta tamarta. Tani ma waxay noqon doontaa tallaabada cusub ee lagu beddelayo isbeddelka tamarta ee ku aaddan inta badan ee la cusbooneysiin karo?
Nidaamyada tamarta ee qaabdhismeedka waaweyn ee maalgashiga waxaa lagu sameeyaa dhowr sano oo rajo ah, xitaa tobannaan sano. Taasi waa mid ka mid ah sababaha qaadashada cusboonaysiinta ayaa gaabis ah: mar haddii la dhiso warshad nukliyeer, gaas, dhuxul (ama nooc kasta oo kale), macquul ma aha in la xiro illaa iyo inta ay ka dhamaaneyso nolosheeda waxtarka leh. Hadday ahaan lahayd, caadi ahaan nama maalgashigii waa la soo ceshan lahaa, taas oo aan dhici doonin sababtoo ah lobbiisyada waaweyn ee halkaas ka jira.
Waxay heleen waddo ay ku soo saaraan koronto qiimaheeda lagu tartamo iyo qaab dib loo cusboonaysiin karo.
Qiimaha tamarta qorraxda iyo qiimaha dhuxusha
Sannadkan wuxuu caddeeyay tartan loogu jiro tamarta qorraxda dhinacyada oo dhan, tan iyo horumarkii farsamadaXaraashka halka shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ku tartamayaan qandaraasyadaas waaweyn ee korontada la siiyo, bilba bil kadib waxaa loo diiwaan galiyay koronto qorraxda ugu jaban.
Sannadkii hore wuxuu bilaabay qandaraas soo saaro koronto dhan $ 64 MW / saacaddii ka yimid dalka Hindiya. Heshiis cusub bishii Ogosto ayaa hoos u dhigay tiradaas oo ah tiro aan caadi ahayn oo hadda uun dhammaatay $ 29 megawatt waqtiga Chile. Lacagtaasi waa mid muhiim ah marka loo eego qiimaha korontada, iyadoo ku dhowaad a 50% ka jaban ka badan qiimaha ay bixiso dhuxusha.
Iyadoo warbixinta Kharashyada Tamarta Levelized (Kharashka Farsamo ee tiknoolajiyadaha Tamarta ee kala duwan, iyada oo aan wax kab ah lagu kicin). Waxaa la helay in sannad kasta, cusboonaysiin karo way ka jaban yihiin kuwa caadiga ahna waa ka qaalisan yihiin.
Isbeddellada kharashkuna waa in ka badan cad 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Qiima dhimista cajiibka ah ee tamarta qoraxda
Hagaag, waxaan iibsaday boodhadh iyo baytariyada sanadkii 2015 hadana waxaan ka raadsadaa khadka tooska ah waana isku qiimo ama QAAR KABA BADAN. Isla moodeel, summad, karti ... Sidee ayey suurtagal u tahay?